मंगलवार, ४ जेष्ठ २०७८, रबिन थपलिया । सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं १ साङ्ला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा २५ बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर आजबाट सञ्चालनमा आएको छ ।
तारकेश्वर नगरपालीकाले सञ्चालन गरेको उक्त आइशोलेसनको सोमबार मेयर रामेश्वर बोहराले उदघाटन गरे । आइसोलेसनको उदघाटन गदै बोहराले नगरबासीहरुको मनोबल बढाउनको लागि स्थानीयवासीहरुको समेत चाहनालाई सम्बोधन गदै आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।
बोहराले आइसोलेसन सञ्चालनको लागि नगरपालीकाले कार्यविधि बनाएको उल्लेख गदै कोरोनाको बिरामीहरु वडा कार्यालयहरु तथा त्यहाँ रहेको स्वास्थ्य शाखाको सिफारीसमा मात्र भर्ना गरिने बताए । बोहराले कोरोनाको पहिलो फेजका बिरामीहरुलाई आइसोलेसन सेन्टरमा भन्दा पनि होम आइसोलेसनमै बस्ने वातावरण बनाउन वडा तथा नगरस्वास्थ्य मार्फत टोली परिचालन गरिने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नगरपालीकाकी उपमेयर भवानी डोटेलले नागरीकहरुलाई जोगाउन आइसोलेसन बनाएर नगरले एक पाइला अगाडी बढेको बताँउदै अर्को पाइला बढाउनको लागि सबैबाट सहयोग हुनुपर्ने बताइन् ।
नगरपालीकाले सारेको योजना र रणनीतिलाई सकारात्म रुपमा लिएर समाचार सम्प्रेसण गर्ने सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गदै आम नागरीकलाई सकारात्मक र आत्मबल बढाउने खालका सन्देश प्रवाह गर्न जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा तारकेश्वर नगरपालीकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिव लम्सालले आइसोलेसन सञ्चालनको लागि बिभिन्न उपसमितिहरु गठन गरिएको बताँउदै आइसोलेसन सञ्चालनमा सबैबाट सकारात्मक सहयोग पाउने आशा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नगरपालीकाका सवै वडाका अध्यक्षहरु, नगरपालीकाका बिभिन्न शाखाका प्रमुखहरु तथा कर्मचारीहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।
आइसोलेसनका बिरामीले आफै खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने !
तारकेश्वर नगरपालीकाले साङलामा सोमबार देखि सञ्चालनमा ल्याएको आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीले खाना भने आफै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । नगरपालीकाले एक अपील प्रकाशन गदै बिरामीले आफु अनुकुलको खाना आफै व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।
नगरपालीकाले खाध्यान्न तथा भोजन व्यवस्थापनको लागि वडा नं २ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र केसी, सदस्यहरु लक्ष्मी श्रेष्ठ, कर्मचरीको तर्फबाट जनार्दन अधिकारी र सिता थापा सहितको उपसमिति गठन गरेको बताएको थियो ।
यता, नगरवासीहरुले भने आइसोलेसनका बिरामीहरुले खाना आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने नगरको निर्णय अव्यबहारीक भएको भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन् । नगरपालीकाले लाखौं खर्च गरेर बनाइएको आइसोलेसनमा खानाको केहि हजारको खर्च गर्न अनिच्छुक देखिएको प्रति आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ ।
डक्टर र रेडियोग्राफर माग
तारकेश्वर नगरपालीकाले सोमबारबाट आइसोलेसनको सञ्चालन गरेपनि त्यको लागि अझै दक्ष जनशक्ति अपुग रहेको छ । नगरपालीकाले आइसोलेसनको लागि आवश्यक पर्ने एक डक्टर र एक रेडियोग्राफरको लागि भन्दै दरखास्त माग गरेको छ ।